Xildhibaankii ugu horeeyay oo iska casilay Baarlamaanka Maamulka Koonfur Galbeed – STAR FM SOMALIA
Faarax Sheekh Cismaan Cabdi oo ka tirsan Xildhibaanada Baarlamaanka Maamulka Koofur Galbeed, ayaa noqonaaya Xildhibaankii ugu horeeyay oo iska casilay Baarlamaankaasi.
Isagoo maanta la hadlaayay Saxaafadda, ayuu si rasmi ihi u shaaciyay in uu iska casilay xubinimadiisii Baarlamaanka Koonfur Galbeed, ka gadaal markii uu sheegay inaanan beeshiisii la siinin saamigii ay ku laheyd
Mudanahan oo ka mid ahaa 56 Xildhibaano oo maalintii Isniinta lagu dhaariyay Magaalada Baydhabo, ayaa hoosta ka xariiqay in maanta ka dib aanu sii hayn doonin xilkaasi.
“Anigoo ah Mudanaha khaladka loo dhaariyay, sida ay beesha sheegtay Faarax Sheekh Cismaan Cabdi, waxaan iska casilay Xildhibaanimadii Maamulka Koonfur Galbeed Somaliya, oo la ii dhaariyay taariikhda markii ay ahayd 28-kii bisha 12-aad, 2015-ka, ka dib go’aan ka yimid beesha. Maadaama ay ku qanci weysay saami qaybsiga laga siiyay Koonfur Galbeed.” Ayuu yiri Faarax Sheekh Cismaan Cabdi.
Faarax Sheekh Cismaan, ayaa tilmaamay in uu la kulmay beesha uu ka soo jeedo, ayna mowqif mideysan ku wada gaareen in xilkaasi uu iska casilo, sida uu hadalka u dhigay.
Wuxuu carab dhabay in beeshiisa ay si toos ah kalsoonida ugala laabatay Maamulka uu Madaxweynaha ka yahay Shariif Xasan Sheekh Aadan.
“Beesha waxay kalsoonida si toos ah ugala noqotay Maamulka Koonfur Galbeed Somaliya, oo uu hogaamiyo Shariif Xasan Sheekh Aadan. Waad mahadsan tihiin.” Sidaasi waxaa yiri Mudanaha Baarlamaanka Koonfur Galbeed iska casilay.
Baarlamaanka Koonfur Galbeed Somaliya waxaa uu ka kooban yahay 145 Xildhibaano. 89 ka mid ah kol horaa la dhaariyay, halka intii kalana Isniintii lagu dhaariyay Xarunta Gobolka Baay.